XOG: Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Maanta ku dhawaaqaya Golihiisa Wasiirada Cusub | Nabadoon Online	Monday, July 24th, 2017	Home
XOG: Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Maanta ku dhawaaqaya Golihiisa Wasiirada Cusub Mar 8, 2017 - Aragtiyood	Warar aynu dhinacyo badan ka helnay ayaa sheegayo inuu Ra’isul-wasaare Xasan Cali Kheyre diyaariyey Liiska Golihiisa Wasiiradda, lana filayo in maanta oo Arbaco ah lagu dhawaaqo.
Golaha Wasiiradda ayaa waxaay u badnaan doonaan kuwo xilal hore u soo qabtay, waxaana ku yar Siyaasiyiinta wejiyadda cusub ee Golaha Wasiiradda.
Warbaahinta ayaa loo sheegay inay dhici karto in maalnta lagu dhawaaqo, iyadoo lagu soo beegayo maanta oo ku beegan hal bil ka hor maalintii uu Madaxweyne Farmaajo ku guuleystay Doorashaddii Madaxtinimadda ee dhacday (Arbaco, February 08, 2017).
Warar ayaa sheegaya inay Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiye Farmaajo iyo RW Kheyre saqdii dhexe ee xalay ku gaareen Kulankoodii ugu dambeeyey ee ay iskula eegeen Liiska Golaha Wasiiradda oo lagu saleeyey Nidaamka Awood-qeybsiga Maamulka
Ma kala cadda inay 3-da Hoggaamiye isku raaceen Liiskaasi iyo in loo baahan yahay Dib-u-habayn kale.
Si kastaba ha ahaatee, Radio Dalsan ma xaqiijin karo Wararka sheegayo in maanta lagu dhawaaqayo Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Ra’isul-wasaare Kheyre, walow Mas’uuliyiin la sheegay inay ka mid noqon doonaan Golaha Wasiiradda ay xalay isugu hambalyeynayeen qaar ka mid ah Hoteelladda Muqdisho.